निरन्तर वर्षा र हिमपात हुनुको कारण यस्तो! – Samaj Khabar
संबाददाता : Samaj Khabar प्रकाशित मिति: २५ माघ २०७५, शुक्रबार ०६:२९
२५ माघ, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर निरन्तर पानी पर्ने क्रम जारी छ । मौसममा आइतबारबाट मात्र सुधार आउन थाल्नेछ । मौसमविदहरुले बिहीबारबाट शनिबारसम्म निरन्तर पानी पर्ने घोषणा पहिले नै गरेका थिए । यसबाट धेरैलाई लागेको थियो, पानी निरन्तर परिरहेपछि चिसो अत्यधिक बढ्ने छ र जनजीवन नै प्रभावित हुनेछ ।
तर जति सोचिएको थियो, त्यति धेरै चिसो महसुस गरिएको छैन । किन होला ? मौसमविद शान्ति कँडेल भन्छिन्, ‘आकाशमा बादल लाग्यो भने न्यूनतम तापक्रम बढ्छ र ठिहिर्याउने खालको चिसो हुँदैन ।’
२५ माघ २०७५, शुक्रबार ०६:२९ मा प्रकाशित